Dagaal beeleed ka socda deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe – XAMAR POST
Duqeyn culus oo ka dhacday degmooyinka Jilib iyo Bu’aale ee gobolka Jubbada dhexe
Xukuumadda Soomaaliya oo dadaal ku bixineysa Ansixinta Sharci horyaalla Golaha…
Dagaal beeleed ka socda deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe
By Zakariye iiman On Mar 17, 2019
Sida ay sheegayaan Wararka Idaacadda Risaala ee Magaalada Muqdisho kasoo gaaraya Gobolka Shabeellaha dhexe dagaal u dhaxeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa saakay ka bilaawday tuulo hoostagta degmada Cadale ee gobolkaasi Shabeellaha dhexe.
Dagaalka ayaa waxaa uu ka socdaa deegaanka Burdheere, waxaana dadka deegaanka ay ku waramayaan in uu jiro khasaaro labada dhinac ay isku gaarsiiyeen dagaalkaas, hayeeshee aan weli sirasmi ah loo helin tirtada dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay dagaalka.
Maleeshiyadka dagaalamaya ayaa isku-heysta dhul daaqsimeed halkaasi ku yaalla,waxaana lagu soo waramayaa in Ciidamo ka tirsan kuwa Millateriga Soomaaliya oo horay loo kala dhex dhigay ay isaga soo baxeen, sidaasina uu markale dagaalka ku bilaawday.
Labada beelood ee wada dagaalamay ayaa waxaa horay Magaalooyinka Jowhar iyo Cadale loogu qabtay shirar dib u heshiisiin ah, hayeeshee aan weli waxba kasoo bixin, waxaana lagu soo waramayaa in xaalad kacsanaan ah ay maanta ka jirto deegaanka Burdheere oo hoostaga degmada Cadale ee Gobolka Shabeellaha dhexe.
Maamulka G/Shabeellaha Hoose oo sheegay inay dileen Sarkaal….
Sheekh Shaakir oo amar siiyey Ciidamada Maamulka Galmudug
Zakariye iiman May 20, 2019
Duqeyn culus oo ka dhacday degmooyinka Jilib iyo Bu’aale ee gobolka…
SAWIRO: Dabaal dega Xuska 18 May oo bilowday
Aabe Saddex Carruur ah ku waayay roob ka da’ay Puntland
Askar si qaldan loogu dilay duqeyn
SAWIRO:-Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo Odayaasha Dhaqanka kala hadlay Arrinta…
Howlgallo saakay ka socda Magalada Boosaaso
Saraakiishii kormeerayaasha Imtixaanka oo kasoo baxay…